एकाएक चम्कियो सेञ्चुरी बैंक, कारोबारमा पहिरो जाँदा बजारमा 'अशुभ संकेत' Bizshala -
एकाएक चम्कियो सेञ्चुरी बैंक, कारोबारमा पहिरो जाँदा बजारमा 'अशुभ संकेत'
काठमाण्डौ । चालु आर्थिक वर्षको तेश्रो त्रैमासमा अघिल्लो आबको सोही अवधिको तुलनामा १०३ प्रतिशतले नाफा बढाई अधिकांश सूचकमा फड्को मारेको सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक मंगलबार एकाएक चम्किएको छ ।
कान्छो वाणिज्य बैंकले अधिकांश बित्तीय सूचकमा गरेको कमालको प्रगतिबाट भविष्यमा राम्रो रिटर्न दिनसक्ने देखेर लगानीकर्ताले सेञ्चुरीको सेयर खरिदारी बढाउँदा यो कम्पनी एकाएक बजारमा चम्किएको हो ।
यहीकारण आजको बजारमा सबैभन्दा धेरै कारोबार सेञ्चुरी बैंकले गरेको छ । यो कम्पनीले २ करोड ७६ लाख भन्दा बढीको कारोबार गर्यो भने लगानीकर्ताले करिब ३ प्रतिशतले सम्पत्ति बढाए ।
यो दिन बजारमा करेक्सनकै प्रवृति देखियो । सर्टटर्म कारोबारीहरुले ९ दिनसम्म लगातार बढेको बजारबाट नाफा बुक गर्न खोज्दा नेप्से परिसूचक १६ अंकले घटेर १३९४.८६ को विन्दूमा सीमित बन्न पुगेको हो ।
सोमबारको तुलनामा कारोबार रकमतर्फ भने निकै ठूलो पहिरो गएको छ । बजार परिसूचक र कारोबार रकममा एकसाथ यसरी पहिरो जानु राम्रो संकेत मानिदैन । यो प्रवृति बजारमा केही दिनसम्म जारी रहे भविष्यमा बजारले ओरालो यात्रा हिँड्न सुरु गर्ने जानकार बताउँछन् । तर, मंगलबारकै बजारको घट्दो प्रवृतिलाई हेरेर बजार भविष्यमा तल झर्छ भनी अनुमान गरियो भने त्यो चाहि मूर्खता हुनेछ ।
यो दिन 'क' वर्गका कम्पनीमा बिक्री चाप देखिएका कारण सेन्सेटिभ इण्डेक्स ३.४२ अंकले घट्यो भने समग्र कारोबार मापक फ्लोट इण्डेक्समा .१.१३ अंकको गिरावट देखियो ।
व्यापार समूहमा २.८७ अंकको वृद्धि भए पनि बाँकी सबै समूहको सूचकमा गिरावट आएको छ ।
बैंकिंग समूह १५.८५ अंकले घटेको छ भने विकास बैंक २७.७९, माइक्रोफाइनान्स समूह १०.५१ अंक र बिमा समूह ७६ अंकले घटेका छन् ।
होटल समूह ११.८३ अंक, जलविद्युत समूह १३.१ अंक, बित्त समूह ९.९२,उत्पादनमूलक ९.९१ र अन्य समूह ६.८३ अंकले घटेका छन् ।
यो दिन बजारमा १ सय ७० कम्पनीका १७ लाख १९ हजार ८ सय कित्ता सेयर ७३ करोड ९२ लाख २२ हजार ५९ रुपैयाँमा किनबेच भएको छ ।
सबैभन्दा बढी सेञ्चुरी कमिर्सयल बैंकले कारोबार गरेको बजारमा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले २ करोड ६३ लाख, नेपाल बैंकले २ करोड ४३ लाख बढीको कारोबार गरे । राष्टिय बिमा कम्पनीको २ करोड ३७ लाख बढीको साधारण सेयर तथा २ करोड २९ लाख बढीको संस्थापक सेयर समेत कारोबार भएको बजारमा स्वालम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्थाले २ करोड २९ लाख, सानिमा हाइड्रोले २ करोड २३ लाख, प्रिमियर इन्स्योरेन्सले १ करोड ९२ लाख, फरवार्ड माइक्रोफाइनान्सले १ करोड ८४ लाख र चिलिमे हाइड्रोले १ करोड ७२ लाख बढीको कारोबार गरे ।
यो दिन नेशनल माइक्रोफाइनान्स बित्तीय संस्थाले सबैभन्दा बढी कमाएको छ । यो कम्पनीको सेयरमूल्य ६.५३ प्रतिशतले वृद्धि भयो । एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको सेयर मूल्य ६ प्रतिशतले बढ्यो भने यूनाइटेड मोदी हाइड्रोपावरको मूल्य ३.२४ प्रतिशते बढ्यो ।
यो दिन सांग्रला डेभलपमेन्ट बैंक लिमीटेडले सबैभन्दा धेरै गुमायो । यो कम्पनीको सेयर मूल्य ५.३६ प्रतिशतले घट्यो ।
nepal stock exchange bearish market
नेप्सेबाट संवेदनशील सूचना चुहिँदा युनिलिभरको सेयर मूल्यमा
काठमाण्डौ । कम्पनीहरुको वर्गीकरण सम्बन्धी संवेदनशील सूचना नेपाल...
एनएमबी सुलभ फण्डका इकाईधनीले २१.०५२% प्रतिफल पाउने
काठमाण्डौ । एनएमबी म्युचुअल फण्डअन्तर्गत संचालनमा रहेको एनएमबी...
डिम्याट खाता खोल्न रकम असूल्दै ठूला बैंक, नवील र एभरेष्टको
-भक्तराज रसाइली काठमाण्डौ । विश्व लगानीकर्ता सप्ताह-२०१८ को अवसरमा...
प्राविधिक विश्लेषण: दशैं अगाडिको बजारको प्रदर्शन कस्तो होला ?
-धनकुमार राई १२५० भन्दा माथि रहेर खरिदकर्ताहरुको बर्चश्व हाबी...
जुन कमजोर कम्पनी, त्यसकै सेयरमा लगानीकर्ताको मरिहत्ते !
काठमाण्डौ। भीरबाट लड्न लागेको भैंसीलाई राम राम भन्न सकिन्छ, काँध...